4 Matipi Ekuvandudza "Kufambidzana" | Martech Zone
4 Matipi Ekuvandudza "Kufambidzana"
Muvhuro, Ndira 9, 2012 Svondo, October 4, 2015 Hanna Johnson
Kana iwe uri kuverenga Martech Zone, mikana pane mumwe munhu akakubvumidza iwe kutove kune chokwadi chekuti chichava chakakosha kupfuura nakare kose kuti uwane bhizinesi rako rezvemagariro gore rino. A kuongorora kwezvino takaitisa zve KukuraBiz Midhiya zvakaburitsa pachena kuti 40% ye madiki kusvika midsize bhizimusi-vanoita sarudzo vanoronga kushandisa pasocial media muna 2012. Ini nguva pfupi yapfuura ndakanzwa muenzi pa Bhizinesi Insanity Radio Talk Show vanokurudzira kuti vanhu vese vekutengesa vapihwe yavo kambani nhoroondo nhoroondo (Twitter, Facebook, nezvimwewo), kuitira kuti vatengi vavo vave nekukurumidza, nyore, nzira yakajeka yekuvasvikira nguva dzese.
Kune mashoma, kana paine, akaomarara uye anokurumidza mitemo pamusoro pekushandisa Social Media. Basa rangu seSocial Media Marketer ye Zoomerang, Saka zvino SurveyMonkey, zvinoreva kuti ini ndadzidza chinhu kana zviviri nezve zvinoshanda uye, zvinonyanya kukosha, izvo zvisingaite. Chakavanzika cheSocial Media Kubudirira chiri kuvhurika kuyedza zvinhu zvitsva, kuyera mhedzisiro yako, uye kushandisa metriki kuti uone zvinoshanda kwauri, chiratidzo chako, uye vateereri vako. Asi ndine mana matanho akareruka ekuti utange:
1. Usafungidzira. Bvunza
Chakavanzika chekuvaka yakakura yemagariro inotevera kuendesa akakodzera, anonakidza zvemukati kune vateereri vako. Asi ungagadzira sei zvirimo zvikuru kana iwe usingazive kuti vateereri vako ndiani? Bvunza! Gadzira ongororo yakapusa uye utumire iyo kune vateveri vako, mafeni, uye vatengi. Zoomerang uye SurveyMonkey inopa matani emahara matemplate aunogona gadzirisa nekuwedzera mifananidzo, logo yako, uye makambani emakambani.
Bvunza kuti vatengi vako ndivanaani, vari kushandisa sei chigadzirwa chako kana sevhisi, uye vanogutsikana sei. Kunyanya iwe uchiziva nezve ako vatengi uye zvavanoda, zvirinani iwe uchakwanisa kuvapa iwo ruzivo rwavanoona rwunobatsira uye rwunonakidza.
2. Simudzira, Simudzira, Simudzira
Kugadzira zvemukati huru idanho rakakosha, asi ingori nhanho yekutanga. Paunenge iwe wagadzira izvo zvemukati, iwe unofanirwa kuzvisimudzira kusvika kure uye pahupamhi sezvinobvira Zvinoreva Tweeting nezvazvo, kuiisa pane yako Facebook peji, uye inoenderana Linkedin boka mapeji. Rangarira iwo mutemo we80-20, uyo unoti iwe unofanirwa kunge uchipindura kune vamwe vanhu zvemukati 80% yenguva, uye kusimudzira zvako zvemukati chete 20% yenguva. Iwo mutemo wepanyama wechigunwe - hapana munhu anoda kunzwa kuzvisimudzira mumbo jumbo zuva rese.
Asi mukudzidzira iwe unogona kukanganisa mutsetse zvishoma, uye unoenda nenzira mbiri. Taura pane blog kana imwe yemaficha ako Facebook zvinyorwa, uye kana zvichikosha, sanganisira chinongedzo kune yako saiti. Re-tweet ruzivo rwunotaurwa nevamwe vanhu muindasitiri yako, kana isiri yemakwikwi yakanangana uye ichizobatsira vatengi vako. Tarisa uone Linkedin Mhinduro, uye kana mumwe munhu aine dambudziko iro sevhisi yako kana chigadzirwa chingabatsira kugadzirisa, chipa icho. Ingo ita shuwa kuti unodzorera nyasha nekupindura, kuitazve tweeting, uye kufarira mugove wako wakanaka (80%).
3.Kushambadzira Kunobudikira NdiSoo 2011
Mazuva ano zvese zviri nezve Inbound Kushambadzira, iyo inofanirwa kuuya zvakasununguka kana uchinge waziva nhanho 1 ne2. Nekupa vatengi vako ruzivo runonakidza, rwakakodzera, uye nekukurudzira kuburikidza nemikana chaiyo, hazvizotora nguva usati wazvisimbisa seunyanzvi hwakavimbika mumunda mako. Vanhu vanouya kune yako auto kambani blog, kwete chete kana vachida kutenga mota, asi kana vachida kuziva zviri kutaurwa nevanhu nezve 2012 mhando. Vachatanga kushandisa yakawanda nguva pane yako saiti, uye kujairira kuitarisa nekuti ivo vanoziva iwe unonyorera nguva dzose (sudge nudge, wink wink). Kutengesa kwako kunoenderana pamwe nenguva iyo vanhu vari kuuya kune yako saiti, uye izvo zvinoenderana nemabatiro aunoita nhanho 1 ne2.
4. Usatya Izvo Zvakashata: Iva Anoshanda!
Vazhinji vevagadziri veSMB-vateki vandinotaura navo vanotya kuti kuenda munharaunda kunovazarukira kumarudzi ese ezveruzhinji rwakaipa. Ini ndazvionera izvi zvekutanga-zvisingaiti svondo rinopfuura apo pasina peeved mutengi anoburitsa pane yedu Facebook peji, ingave inowirirana zvakananga nechigadzirwa chedu kana kwete. Izvi zvinogona kutyisa, ndinoziva, asi iwe unofanirwa kuyeuka kuti vatengi vanokoshesa njodzi yauri kutora nekuzviisa kunze uko zvakadaro, uye ivo vachakuremekedza iwe nezvazvo. Pakupera kwezuva, ivo vanozove vanonyumwira kambani iyo isina kutora chinzvimbo chemagariro pane imwe iyo inombopisa kupisa pane yavo peji reTwitter. Uye kune wese mutengi asina kugutsikana, isu tine vashanu vanogutsikana kutumira kwavo kugutsikana nechigadzirwa chedu. Makomenti avo anobatsira zvakanyanya kuchiratidzo chedu pane asina kunaka anokuvadza.
Ingo rangarira kubata nemhinduro munguva, nenzira yakanaka. Mutengi anogona kunge asiri echokwadi nguva dzose, asi chero kushushikana kwavanonzwa kunonzwisisika, saka bvuma izvozvo, uye upe matanho anobatsira avanogona kutora kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu. Uye kwete mhinduro dzese dzinozove dzisina kunaka! Kana mumwe munhu akabhadhara iwe rumbidzo, vatende nezvayo, uye uvabvunze kana vangazoda kuita a mutengi kubudirira nyaya newe. Vanowana izwi ravo (uye mucherechedzo) kunze uko, iwe unowana yavo organic endorsement, uye wese munhu anokunda.
Ndinovimba aya matipi mana anobatsira kuti utange pane chako chishuwo chekudyidzana! Ndokumbira utaure zvaunofunga, mamwe matipi, kana chero mibvunzo yauinayo! Kufara kushamwaridzana!
Tags: zvakanakisisa zviitoevanhu vezvenhaupasocial media zvakanaka maitirosocial media tipszvemagariro matipi
Kuchinja maEndaneti Kero muRuzivo rweSocial
Ndira 11, 2012 na12: 35 PM
Mhoro Hanna! Isu tinobvumirana zvizere nemapoinzi awataura pano. Zvemagariro midhiya ipuratifomu yakanakisa yemabhizinesi ekuvaka chiziviso chiziviso uye kuzadzisa zvimwe zvakawanda zvinangwa zvavangave nazvo. Kuishandisa zvinobudirira zvakadaro, zvinoita kunge rakaoma basa kune vamwe. Tinotarisira kuti gore idzva riunze nzira nyowani dzekushandisa pasocial media. Mabhizimusi anofanirwa kurairwa kuti vasvetuke kuti vakwanise kuwana mukana. Zvisinei hazvo Great post!
Ndira 12, 2012 na4: 53 PM
Inbound ndizvo chaizvo zvatakarongera gore rino. Tiri kungonyora yedu yezvematongerwo enyika zano uye ini ndaona ichi chinyorwa chinobatsira kwazvo, saka ndakafunga kuti ndichakuudza sezvo ini ndichida vanhu kuti vataure pane zvandatumira!
Ndiri kuzotora rairo yako nezve kuongorora vateereri vedu. Pfungwa huru.